Jawaab celinta Haptka: Evolution of Touchscreens | Martech Zone
Jawaab celinta Haptic: Evolution of Touchscreens
Saturday, May 22, 2010 Sabtida, Juun 27, 2015 Douglas Karr
Haddii aadan maqlin tiknoolajiyada Haptic, waad maqli doontaa. In ka badan toban sano ka hor, cilmi baarayaal ka socda MIT waxay bilaabeen soo saarista aalado siiya dhiirrigelin toos ah dadka si ay u dareemaan walxo farsamo. Tobankii sano ee la soo dhaafay, tiknoolajiyada ayaa bilaabay inay ka dhigto dariiqa loo maro muraayadaha indhaha.
Sanadkii la soo dhaafay, Imtixaanka Demo'd shaashad taabasho ah CES oo bixisay jawaab celin haptic ah. Adoo hagaajinaya soo noqnoqoshada iyo kicinta farahaaga, waxaad awoodi kartaa inaad soo saarto dareenka aad hesho marka aad dhab ahaan taabato shay. Tusaale ahaan, waxaad ka dhigi kartaa dusha sare mid jilicsan ama qallafsan sida warqadda ciidda. Tiknoolajiyada kaliya ma ahan fursad ay ku furto nidaamyada kombiyuutarka si loo wanaajiyo marin u helida dadka naafada ah, waxay badali kartaa habka aan dhab ahaan ula macaamilno kombiyuutarada guud ahaan.
Hal tusaale waa kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ee kumbuyuutarrada shaashadda taabashada ah. Waxaan ku isticmaalaa Droid ka badan iPhone maxaa yeelay si fudud ayaan waqti adag ugu haystaa isticmaalka aalad aan laheyn jawaab celin taabasho leh. Haddii aan soo qaadan karo iPhone-ka iyo kiiboodhkuba waxay ku siinayaan jawaab celin haptic taabashadayda, waan awoodi lahaa dareemaan furayaasha oo si sax ah u cadaadi.
Tiknoolajiyada ayaa ka sii ballaartay ciyaaraha fiidiyowga iyo farshaxanka, tikniyoolajiyadda iyo baabuurta, sidoo kale. Qiyaas inaad awoodo taabto Darbiga Galbeed ee Qudus, ama qiyaasi isteerinka oo ku siisay jawaab celin haptic ah haddii aad u leexanayso waddo uu baabuur kale joogo! Ama wali - ka fikir dhaqtarka ku tababbaranaya ama u sameynaya meel fog isticmaalka aalad soo bandhigtay jawaab celin sax ah oo haptic ah ee howlaha qalliinka xasaasiga ah.
Waa wax lagu farxo in laga fikiro dhammaan fursadaha iyo sidoo kale sida isgaarsiinta suuqgeynta ay isu beddeli karto haddii aad awooddo taabto macaamiishaada markay ka hawl galayaan khadka tooska ah.
Tags: hafiyojawaab celintascreen taabashada
SaaS waxay u Bedelaysaa inay Database u bixiso Adeeg ahaan
May 22, 2010 at 4: 48 AM
Dhammaantiin waxaan u ahay jawaab-celinta xanta laakiin waligey weligey dhibaato kuma qabin iPhone-ka oo aan haysan Mar kasta oo aan warqad ku riixo kumbuyuutarka shaashadda, nooc weyn oo warqadda ka mid ah ayaa soo baxa isla markaaba wuxuu ii ogeysiinayaa inaan furey fure iyo furaha aan riixay.
Hubaal, maahan wax nacayb leh. Waa muuqaal. Laakiin waxay ku qancineysaa isla ujeeddada ra'yigayga hooseeya 🙂
May 22, 2010 at 9: 53 PM
waaw! Ma maqlin taas laakiin waxay umuuqataa wax cajiib ah. waxaa laga yaabaa in ay noqon doonto jiilka soo socda iphone.